Imtixaanka korontada - Shenzhen Wonderful Technology Co., Ltd
Tan iyo abuuritaanka 1996, PCB Wonderful ayaa diiradda saaraya tayada sare ee badeecada. Sidaas darteed, gabal kasta oo ka mid ah guddiga uu leeyahay in lagu baaro ka hor kaalin dhabta ah ee mashaariicda macaamiisha kaliya si loo helo fulinta siman of qaab aan fiicnayn iyo hawlaha, taasoo ku soo jirtay link muhiim ah in our nidaamka been PCB.
Sida horumar ah ee korantada casri ah oo adag kordhaysa ee wax soo saarka electronic, maalmood marka kaliya kormeerka muuqaal ah waxaa la isku hallaysay ka tageen tan iyo kormeerka muuqaal ah oo keliya shaqeeya yara wanaagsan PCBs double-lakabka iyo PCBs multi-daaha ka hor dukumiintiyo. Maalmahan, horumarinta vias sida vias indha la '/ aasay, way adag tahay kormeerka muuqaal ah si ay u gaaraan in ilaa hadda.
• Bed ee Imtixaanka Cidiyaha
Bed ee imtixaanka ciddiyaha, sidoo kale loo yaqaan qolof deggan ama Roobka universal, waxaa hirgeliyey iyada oo daraasiin kulan imtixaan adag sida waxa magaceeda la tilmaamay.
• Flying oo baaraya Imtixaanka
Dayuurada imtixaan baaritaan ku xiran tahay dhaqaaqin probes si ay u tijaabiso waxqabadka korontada shabaqa kasta on board a circuit dhashay.
sariirta mid ka mid ah imtixaanka ciddiyaha ama imtixaan baaritaan duulaya, waxyaabaha baaro inta badan dabooli ka furmay, gaab, capacitance in ay iska caabin ah in wareeg ah oo ku saabsan loox kasta u dhashay. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah wararka lagu soo koobi karaa natiijada baaritaanka ay ku jiraan qaybta cross, solderability, xoog diirka iwm si qaab fiican iyo dhammaan hawlaha loox u dhashay in la gabi ahaanba xaqiijin karaa in mashaariic aad wax ku ool ah.